Antoko Politika Voalohany any Amerika: Antoko Federaly
History & Culture Fotoan-dehibe & Zava-dehibe
Ny Antoko Federaly: Antoko Politika Voalohany any Amerika
Amin'ny maha-antoko politika voalamina Amerikana voalohany, ny Antoko Federaly dia navitrika nanomboka tamin'ny taona 1790 tany ho any tamin'ny taona 1820. Ao anatin'ny ady ara-pôlitika ara-politika eo amin'ny antokon'ny Rain'ny Fananana , ny Antoko Federaly, tarihin'ny filoha faharoa John Adams , dia nifehy ny governemanta federaly hatramin'ny taona 1801, raha very ny Trano Fotsy tamin'ny Antia-Federaly - antoko Demokraty-Repoblika misahana ny fitondrana notarihan'ny filoha fahatelo Thomas Jefferson .
Ny Federalisiana fohy
Voalohany natsangana ho fanohanana ny politikan'ny fiscal sy banky an'ny Alexander Hamilton , ny
Ny Antoko Federaly dia nitarika ny politikam-panjakana izay nanome governemanta foibe, nanentana ny fitomboana ara-toekarena, ary nitazona tetibola federaly tompon'andraikitra federaly. Ao amin'ny politikany ivelany , ny federalisma dia naniry ny hanorina fifandraisana diplomatika mafana amin'i Angletera, raha manohitra ny Revolisiona Frantsay .
Ny solontenan'ny Antoko Federasiona irery dia i John Adams, izay nanompo tamin'ny 4 Martsa 1797 hatramin'ny 4 Martsa 1801. Raha heverina fa nandresy ny filoha George Washington , teo aloha ny filohan'i Adams, ny politikan'ny federalisma, tsy mbola fantatra amin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ny antoko politika izy, - mpiara-miasa nandritra ny valo taona nitondrany.
Taorian'ny fifaranan'ny filoha John Adams tamin'ny 1801 dia notohizan'ireo antoko Federaly ankolaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 1816. Mbola navitrika hatrany ny antoko hatramin'ny taona 1820, ary ny ankamaroan'ny mpikambana taloha dia nanendry ny antoko Demokratika na Whig .
Na dia teo aza ny faharetan'ny fotoana fohy raha oharina amin'ireo antoko lehibe roa androany, ny Antoko Federaly dia namela fahatsapana maharitra teo amin'i Amerika tamin'ny fametrahana ny fototry ny rafitra ara-toekarena sy ny banky, ny fanamafisana ny rafi-pitsarana nasionaly, ary ny famoronana fitsipika politika ivelany sy ny diplaomasia mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Ankoatra an'i John Adams sy Alexander Hamilton, mpitarika ankolafy Federaly hafa dia ahitana ny filoha lefitra John Jay, ny sekreteram-panjakana sy ny filoham-pirenena John Marshall, ny Sekreteram-panjakana ary ny sekreteran'ny ady Timothy Pickering, ilay olom-panjakana fanta-daza Charles Cotesworth Pinckney, sy ny Senatera Amerikana sy diplomat Rufus King.
Tamin'ny taona 1787, ireo mpitarika antoko federalista farany ireo dia anisan'ny tarika lehibe kokoa izay nanampy ny fampihenana ny fahefan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanoloana ny fifanekem-pahefana tsy mahomby amin'ny lalampanorenana vaovao manaporofo ny governemanta foibe matanjaka kokoa. Na izany aza, satria maro amin'ireo mpikambana avy amin'ny Antoko Federaly-Repoblika Demokratika-Repoblika avy amin'i Thomas Jefferson sy James Madison no nanohana ny Lalàmpanorenana, ny Antoko Federaly dia tsy mivantana avy ao amin'ny antoko mpanohitra na ny "federalista". Na izany aza, ny Antoko Federaly ary ny mpifanandrina aminy Democratic-Republican Party dia niova ho valin'ny olana hafa.
Tany izay nipetrahan'ny antoko Federaly momba ireo olana
Ny Antoko Federalista dia novolavolaina tamin'ny valinteny nomeny momba ireo olana fototra telo miompana amin'ny governemanta federaly vaovao: ny rafitra ara-bola sasantsasany ataon'ny banky, ny fifandraisana diplomatika amin'i Grande-Bretagne, ary ny tena mifanohitra amin'izany, ny filàna ny lalàm-panorenana vaovao Amerikana.
Mba hiatrehana ny toe-draharaha ara-bola sy ara-bola, ny Federalisma dia nanolo-tena ny hamolavola ny drafitr'i Alexander Hamilton handrindra ny banky nasionaly, hamorona farango federaly, ary ny governemanta federaly dia mihevitra ny trosan'ny revolisiona miady amin'ny fanjakana.
Ny federalisma koa dia nijoro ho an'ny fifandraisana tsara amin'i Grande-Bretagne araka ny nambaran'i John Jay ao amin'ny Fifanarahana Amity nifanarahana tamin'ny 1794. Fantatra amin'ny hoe "Fifanarahana Jay", io fifanarahana io dia nitady ny hamaha ny olana momba ny Revolisiona miady eo anelanelan'ireo firenena roa ary nanome alalana ny varotra amerikana ny zon'ireo mpanjanaka any Grande-Bretagne akaikin'i Karaiba.
Farany, niady hevitra mafy ny Antoko Federalista noho ny fanekena ny lalàm-panorenana vaovao. Mba hanampiana ny fandikana ny Lalàm-panorenana, dia namolavola sy nampiroborobo ny foto-kevitr'ireo kongresy ao amin'ny Kongresy i Alexander Hamilton, izay, raha tsy nomena azy manokana tao amin'ny Lalàm-panorenana, dia "ilaina sy mety."
Ny fanoherana tsy mivadika
Ny mpanohitra ny Antoko Federaly, ny Antoko Demokratika-repoblika, tarihan'i Thomas Jefferson , dia nanameloka ny hevitry ny banky nasionaly sy ny fahefana miseho, ary nanafika ny fifanarahana tamin'i Jay sy Grande-Bretagne ho toy ny famadihana ny soatoavina Amerikana sarotra. Nolazain'izy ireo ampahibemaso an'i Jay sy Hamilton ho mpitondra montsana mpandika lalàna, ary nizara sombin-taratasy mivaky toy izao mihitsy aza: "Malahelo John Jay! Teneno ny rehetra izay tsy hamadika an'i John Jay! Ario izay rehetra tsy hametraka jiro eo am-baravarankeliny ary mipetraha mandritra ny alina alahelo John Jay! "
Ny fiakarana haingana sy ny fahalavoan'ny antoko Federaly
Araka ny asehon'ny tantara, nahazo ny filoham-pirenena tamin'ny 1798 i John Adams, mpitarika federaly, tamin'ny 1798, ny "Bank of the United States" tao Hamilton, ary ny fifanarahana tamin'i Jay dia nifanarahana. Niaraka tamin'ny fanohanan'ny Filoha George Washington tsy filoham-pirenena izy ireo talohan'ny fifidianana an'i Adams, nandresy ny ady ara-politika lehibe indrindra nandritra ny taona 1790 ny federalisma.
Na dia nanohana ny mpifidy tao amin'ny tanàn-dehibe sy ny Anglisy aza ny Antoko Federaly, dia nanomboka nihena be ny fahefan'ny fifidianana raha nanangana antoko-be sy antokon'olom-borona maro tany amin'ny faritra ambanivohitr'i Atsimo ny Antoko Demokratika-Repoblika.
Taorian'ilay hetsi-panoherana henjana natao tamin'ny revolisiona Frantsay sy ilay antsoina hoe Quasi-Ady miaraka amin'i Frantsa, ary ny hetra vaovao napetraky ny fitondrana federaly, ilay mpirotsaka Demokraty-Repoblika Thomas Jefferson dia nandresy ny filoha Federaly teo aloha John Adams tamin'ny fifidianana valo monja ny vato amin'ny fifidianana fifidianana 1800 .
Na dia eo aza ny fitohizan'ny mpilatsaka an-tsitrapo hatramin'ny taona 1816, ny Antoko Federalista dia tsy nahavita nifehy ny Trano Fotsy na ny Kongresy. Raha nanohitra azy tamin'ny Ady tamin'ny 1812 ny fanoherana mahery vaika dia nanampy azy hanohana ny fanohanana izany, saingy nanjavona nandritra ny vanim-potoanan'ny fahatsapana izay nanaraka ny fiafaran'ny ady tamin'ny taona 1815.
Androany, ny lova navelan'ny Antoko Federaly dia mitoetra amin'ny endriky ny governemanta foibe Amerikana, rafitra ara-banky matanjaka, ary toekarena ara-toekarena. Na oviana na oviana dia tsy naharesy ny fahefana mpanatanteraka, ny rafi-pitenenan'ny federalisma dia nanohy nanamafy ny lalàm-panorenana lalàm-panorenana sy ara-pitsarana nandritra ny telopolo taona teo ho eo tamin'ny alàlan'ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Tampony teo ambany fitarihan'ny Lehiben'ny fitsarana John Marshall
Ny fiaramanidina mpiady amin'ny antoko Federaly
Ny Antoko Federalista dia antoko politika ofisialy Amerikana voalohany.
Izy io dia nanomboka tamin'ny 1790 tany ho any ka hatramin'ny 1820 tany ho any.
Ny mpikambana tokana nanendrena azy ho filoha dia i John Adams, voafidy tamin'ny taona 1796.
Ny mpitarika hafa dia ahitana an'i Alexander Hamilton, John Jay, ary John Marshall.
Nanohitra izany ny Antoko Demokratika-Repoblika notarihin'i Thomas Jefferson.
Ny antoko dia nijoro ho governemanta foibe, toe-karena matanjaka ary diplomatika miaraka amin'i Grande-Bretagne.
> Wood, Empire of Liberty: Tantaran'ny Repoblika Voalohany , 1789-1815 (2009).
> Elkins sy McKitrick, Age of Federalism , pp. 451-61
> Antoko Federaly: Facts and Summary , History.com
Ny vanim-potoanan'ny Tantara Amerikana 1851-1860
Diary nanomboka tamin'ny 1810 hatramin'ny 1820
Diary nanomboka tamin'ny 1880 ka hatramin'ny 1890
Hetsika goavana izay nitondra tamin'ny Revolisiona Amerikana
Ny fizotry ny fotoana hatramin'ny taona 1840 hatramin'ny 1850
Lalàna momba ny fifindra-monina Amerikana tamin'ny taona 1917
Ny fampielezan-kevitry ny prezidàn'ny taona 1800
Tahirin'ny tantara Amerikana - 1651 - 1675
Decade By Decade, Timeline of the 1800s
Foto-tsarin'ny fanavaozana Era
Ny fizotry ny fotoana 1850 hatramin'ny 1860
22 Ny bibikely mananontanona dia manimba ny hazo
Famaritana ny namana
Juan Luis Guerra - Hira Tsara Indrindra
Fantaro hoe inona no dikan'ny teny
Ny boky 10 tsara indrindra dinôzôra
8 noeritreretin'ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana any Utah
University of Nebraska GPA, SAT, ary ACT Data
12 Verbs Frantsay tsara
Ireo hafatra avy amin'ny arkanjely Gabriel ao amin'ny nofy
Fametrahana Fanontaniana - Fianarana fanampiny
Inona no atao hoe processo isobarika?
Ny Rambo Granny any Melbourne
Ahoana ny fiatombohana manomboka fiara amin'ny fampiasana jiro cable
Jupiter Sign Table hatramin'ny 2022 - Find Yours
Andriamanitra sy ny andriamanibavy ao amin'ny tononkalo Homer ny Iliad
Ny fomba amam-piainana samihafa dia mitovy bebe kokoa
11 Môrmana Tokony Manao Valin-kafatra Ireo Politika Kandidà
ANARAN'ANDRIAMANITRA GUERRERO sy ny niaviany
Raha tianao tahaka an'i Bruce Springsteen ...
Inona no atao hoe "Avelao" ao amin'ny Ping-Pong?
Sarintany manan-tantara sy tompon-tany amin'ny aterineto
Fambolena, fampiroboroboana, ary fivarotana Royal Paulownia